အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? | USAHello | USAHello
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? The best way to prepare for your test is to know what is on the HiSET test. Here is the information you need to know about what is on the HiSET test. လေ့လာစမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? ဒါဟာသင်မြျှောလငျ့နိုငျကဘာလဲ:
The whole test takes betweenalittle longer than7နာရီ, ဒါပေမယ့်သင်ကယူနိုင်ပါသည်5parts on different days over several months. ဒါကအလုပ်ရှုပ်လုပ်သားများနှင့်မိဘများအတွက်ကောင်းလှ၏. ဒါဟာသင်သီးခြားစီစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားကိုသိစိတျအပိုငျးယူနိုင်ပါသည်, ထို့နောက်ခက်ခဲအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အလေ့လာဖို့သင်၏အချိန်ကိုသုံးပါ.
သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် အခမဲ့အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ သငျသညျအဆင်သင့်လျှင်ကြည့်ရှုရန်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် download many official HiSET™ practice tests အော့ဖ်လိုင်းယူ.
တစ်ဦးကမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသငျသညျအဖြေကိုတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးသည်. မေးခွန်းကစာသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်ပါကပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်မြေပုံအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်. ဒါဟာပုံဖြစ်စေခြင်းငှါ,, တစ်ဦးဇယားအပါအဝင်, စားပှဲ, သို့မဟုတ်ဂရပ်. စာသားသို့မဟုတ် image ကိုအောက်တွင်မေးခွန်းတစ်ခု, ပြီးတော့အဖြေကိုတစ်ဦးစာရင်းဖွစျလိမျ့မညျ, ဒီဥပမာများကဲ့သို့လက်ျာဘက်. သင်ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လက်ျာတစျဦးကိုရှေးခယျြ, သို့မဟုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်အမှတ်အသားတစ်ခုအောင်.
မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာအဖြေကိုသငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်. သင်ရုံကဖြစ်သည့်တဦးတည်းထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ပေးထားသောနေကြသည်သတင်းအချက်အလက်များမှာဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်. အလွန်ဂရုတစိုက်မေးခွန်း Read, လွန်း. ဒါဟာသင်နည်းနည်းလှည့်စားစေခြင်းငှါ, ဥပမာ -, ပြောစေခြင်းငှါ,, စစ်မှန်တဲ့ဘယ်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး?
You can take the HiSET™ test on paper or onacomputer. မတူညီတဲ့ပုံစံများကြိုးစားပါ - သင်ရှေ့ဆက်အချိန်လေ့ကျင့်လျှင်သင်မေးခွန်းအမျိုးအစားများအားလုံးဖြည့်စွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်!
အဆိုပါ Download တာဝန်ရှိသူတဦးကနမူနာမေးခွန်းများကို to try HiSET™ questions on paper.
ယင်းကိုသုံးပါ official free practice tests to try HiSET™ questions onacomputer. You will have to sign in with an email address to try these questions.
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? ငါး subtests ရှိပါတယ် (ဘာသာရပ်များ) on the HiSET™ exam: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာအတတ်ပညာ (တိုတောင်းသောအဘို့အသင်္ချာ), စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း.
The HiSET™ language arts – reading test takes 65 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ် 50 multiple-choice questions.
The material might be fromaspeech, စာတစ်စောင်, သတင်းစာဆောင်းပါး, သို့မဟုတ်စာအုပ်ကနေကျမ်းပိုဒ်. 60 percent of texts are from literature (novels or poetry for example) နှင့် 40 percent of texts are information, such as articles. The texts you read will be about 400 သို့ 600 words long.
The HiSET™ language arts – writing test takes 120 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ်2စိတျအပိုငျး: the first part with 60 multiple-choice questions lasts 75 မိနစ်များ, and the second part with 1 essay question last 45 မိနစ်များ.
This test measures your ability to edit and correct standard American English text. It will ask you questions about correct ways of writing. ဒါဟာသဒ္ဒါသင်တို့၏နားလည်မှုစုံစမ်းမည်.
With the essay question, the testers want to see that you can organize your information, စိတ်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်ဖွံ့ဖြိုး, ဥပမာပေး, နှင့်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းစွာရေးဖို့.
သင်ကဘာသာစကားအနုပညာစမ်းသပ်သွားမဆိုဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး. သင်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းအရာကိုသိနားလည်ကြောင်းပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်, သငျတို့သမှန်ကန်သောအင်္ဂလိပ်ရေးလိုက်နိုငျကွောငျး.
The HiSET™social studies test lasts 70 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ် 60 multiple-choice questions.
The testers may expect some basic knowledge about the world and the United States, but it measures your ability to understand and interpret information more than it tests your knowledge of facts. You will read and evaluate information about subjects such as history, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ, psychology, sociology, anthropology, geography and economics.
The questions use primary documents, posters, cartoons, timelines, maps, ဂရပ်များ, tables, charts as well as reading passages.
The HiSET™ math test lasts 90 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ် 55 multiple-choice questions. You may useacalculator for this section. The computer version of this test has an on-screen calculator. သင်စက္ကူ-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏စမ်းသပ်တာဆိုရင်တော့, your test center will give youahandheld calculator. The decision for the type of calculator used is up to your state.
စမ်းသပ်မှုအများစုဟာကိုယ့်အခြေခံသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်. Many questions (45%) use algebra, and some will use geometry.
The HiSET™ math test takes 80 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ် 60 multiple-choice questions.
The test measures your understanding of some basic scientific ideas. It will test your ability to use science content knowledge, apply principles of scientific inquiry (သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း), and interpret and evaluate scientific information.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ more about all the HiSET™ subtests.
သင်လုပ်နိုင်သည် ယင်းယူဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ HiSET™ စမ်းသပ် ကိုယ့်n your state.